unovalo umqeqeshi ojikiswe e-afrika - Ilanga News
Home Ezemidlalo unovalo umqeqeshi ojikiswe e-afrika
unovalo umqeqeshi ojikiswe e-afrika
UTHUKA izanya umqeqeshi ozakhele udumo elolonga kwi-Absa Premiership okuvela ukuthi ujikiswe esikhumulweni sezindiza ngamasosha emsola ngokuthi ufuna ukuyofafaza i-coronavirus ekilabhini yase-Afrika asebenza kuyona.
ULuc Eymael (osesithombeni)odabuka eBelgium, ujoyine iYoung Africans yaseTanzania maphakathi nesizini emuva kokuba elaxaze iBlack Leopards ekhala ngokuthi ayihlelekile.
Njengoba kubheduke i-coronavirus umhlaba wonke nebhola laseTanzania sekunesikhathi limisiwe ngenxa yalo mkhuhlane.
Leli phephandaba lixoxa no-Eymael ngoLwesithathu olwedlule eseBelgium, ulitshele ukuthi umatasa upakisha imithwalo yakhe njengoba ebuyela eTanzania kwazise ikilabhu yakhe idinga ebuyile.
Izolo ngeSonto emini leli phephandaba lithinte lo mqeqeshi lifuna ukuzwa ukuthi uhambe kanjani ukuya eTanzania uzwa-kale ethukile njengoba ethe uyoyixoxela amagwababa echobana into emenzakalele.
“Njengoba ngikhuluma nawe nje, ngiseBelgium ngizulazula nenja yami egcekeni ngoba ngizama ukuqeda ukhwantalala.
“Ngehlelwe yinto ebuhlungu kabi ngizama ukubuyela eTanzania namanje ngisathukile.
“Ikilabhu ingisendele yonke imininingwane yebhanoyi nange-mpela ngayogibela ngoba bekufanele ngiqale e-Ethiopia bese ngixhuma.
“Kube wukwehla nje e-Ethiopia amasosha angihlohloloza athi ku-fanele ngibuyele emuva. Angihlohloloze kabuhlungu aze angisola ngokuthi ngifuna ukuzofafaza i-coronavirus e-Afrika.
“Kwale ngisho sengichaza ukuthi kanginayo athi angibuyele emuva.
“Ngigcine sengibuyela emuva kanjalo njengoba namanje ngiselapha eBelgium,’’ kusho u-Eymael ngezwi eliphansi.
Usola ikilabhu yakhe ngoku-ngahleleki njengoba ethi icishe yamulalisa emigwaqeni yase-Ethiopia.
“Nakuba amasosha engiphathe kabi kodwa nekilabhu yami ngiyayisola ngoba ingisendele imininingwane yebhanoyi ekubeni umengameli waseTanzania ezivalile izindiza zangaphandle.
“Kuyacaca ukuthi ukube amasosha awangiphindiselanga emuva bengingeke ngifike eTanzania bengizogcina ngihleli emigwaqeni yase-Ethiopia.
“Kodwa-ke engikufundile ngayo yonke le nto wukuthi le-corona iyingozi kanti amanye amazwe ase-afrika ayithathela phezulu le nto.
“Ngiyacela kubantu ukuba bayilandele imiyalelo kahulumeni ngoba leli gciwane liyingozi,” kuphetha lo mqeqeshi.
Previous articleucathanyelwa eyasegoli owe-arrows
Next articleI-LIVERPOOL EZINHLELWENI ZOKUTHEZA ABASHA